Ezi anụ ezi onye anaghị eri anụ vs ezi anụ ezi: Ụzọ ịzụlite ezi ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Ezi anụ ezi onye anaghị eri anụ vs ezi anụ ezi: Ụzọ ịzụlite ezi ọhụrụ
Ezi anụ ezi onye anaghị eri anụ vs ezigbo anụ ezi: Ụzọ ịzụlite ezi ọhụrụ
Ezi anụ ezi ihe nketa Hong Kong
The veggie craze ejirila oke mmiri kpochapụ Hong Kong wee hụ ya dị ka otu n'ime nhọrọ kacha mma maka iri ezigbo nri. Site na nke ahụ, ezi ndị ahụ na-azụ na mpaghara site na Hong Kong Heritage Pork nchoputa John Lau Hon Kit si ọhụrụ ụzọ ozuzu bụ ọhụrụ, eke na hormone-free. Uru oriri na-edozi ahụ nke ezigbo anụ ezi dị ka nke a dị anya karịa nke ndị ọzọ anụ ezi ndị anaghị eri anụ. The Tai Chi pigs nke John Lau Hon Kit bred juputara na nri, na-atọ ụtọ, ma na-eme ka ụtọ anụ ezi a na-eri n'ógbè ahụ ghara ichefu echefu.
John Lau Hon Kit na-eme ka ezì niile zụlitere n'ugbo ya na-eri nri naanị nri kachasị mma nke na-enweghị homonụ agbakwunyere na ọgwụ na-enweghị isi ma ọ bụ oke oke. N'ihi usoro ozuzu ya siri ike na ịzụlite ya, ọ na-enwe ike ịmepụta anụ ezi nke kachasị mma bụ ihe okike, ahụike na nke na-atọ ụtọ. A na-ebunye nri niile maka ezì ya site na igwe nri sitere na Denmark bụ nke European Union kwadoro. Ọzọkwa, mmiri ọṅụṅụ maka ezì na-abịa site na Lau Fau Shan Mountain, isi iyi nke nwere mmiri bara ụba na mineral.
E jiri ya tụnyere anụ ezi anụ anaghị eri anụ ugbu a n'ahịa, John Lau Hon Kit na-ekwusi ike na ọrụ ọhụrụ ya na nkà mmụta sayensị na-akwado na usoro ọmụmụ nwere ike hụ na anụ ezi anụ ezi dị elu, na-edozi ahụ na-atọ ụtọ. Ọtụtụ n'ime anụ anaghị eri anụ kwesịrị iji nnu, mmanụ na ihe ndị ọzọ na-esi ísì ụtọ na-edozi ya iji mee ka ekpomeekpo na ọdịdị anụ ahụ dị n'ezie, na-ebute ọdịnaya sodium dị elu nke yiri nri a na-edozi ma ọ bụ mkpọ. Dịka ọmụmaatụ, otu ogbe achịcha 100g nke anụ anaghị eri anụ enweelarị 550 mg nke sodium. Ebe otu oke abụba na anụ ezi na-esighi ike (esighi ya nke ọhụrụ) bụ naanị 59.4 mg. Dị ka ndụmọdụ nke Òtù Ahụ Ike Ụwa si kwuo, ihe oriri sodium nke okenye kwa ụbọchị ekwesịghị ịfe 2000 mg, nke bụ ihe dịka otu teaspoon (gram 5) nke nnu tebụl.
Ezi anụ ezi dị ala na abụba juru eju
Iji nọgide na-enwe ogo dị elu nke anụ ezi anụ ezi n'ime ugbo Hong Kong Heritage Pork, John Lau Hon Kit kwenyesiri ike na imejuputa usoro mmepụta ọhụrụ na ọrụ ugbo ezi nke na-akwado ịzụ ezì na nri ahụike na nri. Ọ bụghị naanị na anụ ezi sitere n'ugbo John Lau Hon Kit dị ọhụrụ, na-atọ ụtọ ma dị mma, mana onye ọ bụla nwere ike iji obi ike rie ya. Ebe ọ bụ na anụ ezi dị obere na abụba juru eju, anụ John Lau Hon Kit's Tai Chi Pork nwere oke abụba ma dabere, nke pụtara na ọ bara ụbara na abụba dị mma mana n'otu oge ahụ ọ bụghị oke abụba. The Tai Chi pigs bred site John Lau Hon Kit na-ejikọta àgwà kachasị mma nke ezi Berkshire na-esi ísì ụtọ na ịdị nro nke Danish Landrace pigs, na agba agba nke Duroc pig iji mee Hong Kong Heritage Pork's Tai Chi pigs.
Ọ bụ ezie na anụ ezi onye anaghị eri anụ enweghị kọlestrọl, abụba juru eju ya dị elu karịa anụ ezi. Ọzọkwa, a na-emekarị anụ ezi onye anaghị eri anụ site na soybean, peas, osikapa, mmanụ ihe oriri, na ihe na-eko achịcha. Nke a nwere ike ịkpatara ndị na-enweghị ike iri nri nwere cholesterol dị elu ma ọ bụ ndị nwere ihe nfụkasị nri dị ka ọka wit ma ọ bụ gluten.
Usoro ozuzu ọhụrụ na-ebuli ezì mpaghara
John Lau Hon Kit na-ekwusi ike n'ịzụlite ezi Tai Chi ya na-ejighi homonụ na ọgwụ nje ma na-eji naanị ọka dị elu nke EU kwadoro na soybean sitere na America dị ka nri ha kwa ụbọchị. Site na mmalite ruo na njedebe, ọ raara onwe ya nye ịzụ ezì dị elu na inye ahịa Hong Kong anụ ezi na-atọ ụtọ ma dị ọhụrụ na-enweghị ihe mgbakwunye.
N'ihe gbasara ọrụ ugbo na nkà na ụzụ ịzụ nwa, John Lau Hon Kit butere ụzọ n'iwebata ụdị mmepụta ọhụrụ sitere na Denmark na Hong Kong iji dochie ụdị ọrụ ugbo ezi. Gụnyere nhazi nri batch, usoro nchekwa biometric, sistemu mmiri jụrụ oyi, nleba anya 24/7 akpaaka nke okpomọkụ ụlọ, na ndị ọzọ.